Global Voices teny Malagasy » Shina: Mandroaka ireo tsy an’asa ao Shenzhen · Global Voices teny Malagasy » Print
Shina: Mandroaka ireo tsy an'asa ao Shenzhen
Voadika ny 25 Mey 2018 3:51 GMT 1	 · Mpanoratra Don Weinland Nandika Miranah
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Sendikà, Zon'olombelona
(Marihana fa efa tamin'ny volana Mey taona 2010 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Manaisotra amin'ny tanàna ireo tsy an'asa tsy mihoatra ny telo volana – izany no nolazain'ny ben'ny tanàna lefitr'i Shenzhen sady lehiben'ny polisy tamin'ny 29 aprily ho setrin'ny olana ara-pandriampahalemana ao amin'io faritra manokana ara-toekarena any atsimon'i Shina io. Niteraka valinteny mahery vaika tamin'ny aterineto izany sosokevitra izany..
Nandritra ny fihaonana niaraka tamin'ny Filankevitra Mpanolo-tsaina Ara-politika any Hong Kong-Macau, nilaza ny ben'ny tanàna lefitr'i Shenzhen, Li Ming, sady lehiben'ny biraon'ny polisy fa raha afaka manana lalàna fototra i Shenzhen, dia hametra ny isan'ireo mpiasa mpifindra monina tsy an'asa nandritra ny telo volana mahery mba tsy hanofa trano, raha ny marina dia mangataka azy ireo hiala ny tanàna. Notehafan'ny filankevitra ny tolo-kevitra, araka ny tatitry ny Southern Daily .
Nilaza i Li fa ireo mpiasa mpifindra monina tsy an'asa no tompon'andraikitra amin'ny ampahany betsaka amin'ny heloka bevava ao Shenzhen, hoy ny tatitry ny Southern Daily. Nilaza izy fa ny 88 isan-jaton'ireo gadra ao amin'ny fonjan'ny tanàna dia sambany nanao heloka, maro amin'izy ireo no nifindra monina avy any amin'ny faritra anatiny mba hitady asa. Voalaza fa olona tsy an'asa 1 tapitrisa no monina ao Shenzhen ankehitriny.
Southery Daily nanonona an'i Li ho niteny hoe “Manaramaso sy mandamina ireo mpiasa tsy an'asa no tena ilaina hamahana ny olana ara-pandriampahalemana ao Shenzhen. Raha tsy mamaha izany, dia tsy misy fanantenana ho an'ny filaminana. “
Nitombo avo roa heny ny mponina ao Shenzhen, faritra ara-toekarena manokana voalohany ao Shina tao anatin'ny fito taona. Nitombo 14 tapitrisa ny isan'ny mponina ny taona 2010 raha 7 tapitrisa izany tamin'ny taona 2003, izany hoe fitomboana 1 tapitrisa isan-taona.
Tamin'ny lahatsoratra tao amin'ny Southern Daily, nilaza i Li fa matetika tsy ampy ny isan'ny mpitandro ny filaminana ao Shenzhen, polisy 13,5 monja ho an'ny olona 10 000. Latsaky ny atsasaky ny isan'ny polisy isaky ny olona ao amin'ny tanàna akaiky ao Guangzhou, izay voalaza fa manana mpitandro ny filaminana 29,7 isaky ny mponina 10.000.
Tsy mankasitraka ny soso-kevitr'i Li ny valinteny an-tserasera. Bilaogera marobe no nahita fa fandikàna ny zo fototry ny mpiasa mpifindra monina izany. Ny hafa kosa niantso izany fa tsy rariny ho an'ny vahoaka mpifindra monina manontolo. Nilaza ilay bilaogera Hai Ta  fa manasokajy ireo mpifindra monina tsy an'asa ho jiolahy ny fepetra tahaka izany.
Tsy azo lavina fa mpiasa mpifindra monina tsy an'asa ny maro amin'ireo jiolahy ao Shenzhen. Saingy ampahany kely ihany amin'ireo jiolahy ireo mpiasa mpifindra monina tsy an'asa. Ny lalàna hanafoana [azy ireo] dia mitovy amin'ny fandraisana ireo mpiasa mpifindra monina tsy an'asa rehetra tahaka ny jiolahy. Tena tsy rariny ho an'ireo izay mbola tsy nanao heloka bevava izany.
Milaza ny mpanoratra fa fanitsakitsahana ny zo fototra ny fepetra.
Zava-dehibe kokoa, zo voajanaharin'ny olom-pirenena ny fahalalahana hifindra monina, ary tsy misy vondrona na olona manan-jo hametra izany. Tsy manan-jo handroaka ireo mpiasa tsy an'asa i Shenzhen, na toerana hafa.
Milaza ilay bilaogera Zhuben-Dingchong  fa mametraka olana momba ny lalàna tokoa ny soso-kevitra:
这位官员法律素养欠缺，体现在他向政协委员谈论法律依据这点上。首先，法律依据不够，这位官员居然不懂得政协委员可没有立法权，人民代表才有给予他法律依据的可能 … 再次，通过立法不租给无业者房子，并不是以法律规范市场经济的行为…
Miharihary ny tsy fahampian'ny fahaizana momba ny lalàna eo amin'ity tompon'andraikitra ity tamin'ny resaka nataony momba ny lalàna fototra miaraka amin'ny mpikambana ao amin'ny Filankevitra Ara-politika. Voalohany indrindra, tsy ampy ny lalàna fototra. Mahagaga, tsy mahatakatra ity manampahefana ity fa tsy manana fahefana momba ny lalàna ireo mpikambana ao amin'ny Filankevitra Ara-politika. Ireo solombavambahoaka ihany no afaka manome azy izany fahefana izany… Etsy andaniny, tsy fomba ara-dalàna handaminana ny tsena ny famoahana lalàna mandràra ny fanofàna trano ho an'ireo tsy an'asa….
Bilaogera Chisun  nanoratra fa manan-jo hanofa trano izay safidiny ny olom-pirenena Shenzhen.
Mikasika ny tsy fanofana trano ho an'ireo mpiasa tsy an'asa mandritra ny telo volana mahery, manana fahalalahana sy zo voalaza ao anatin'ny lalàm-panorenana ireo mponina ao Shenzhen izay manofa trano ho an'ny olom-pirenena ara-dalàna rehetra, anisan'izany ireo mpiasa tsy an'asa izay tsy nanao heloka bevava ary tsy misy olona manan-jo hitsabaka na hametra izany. Fahalalana fototra momba ny fifanakalozana ara-barotra izany.
Li Zheqi,  mpanolotsaina lehiben'ny orinasa malaza momba ny varotra, nanoratra tamin'ny blaoginy fa na dia mitondra olana ao an-tanàna aza ireo mpiasa mpifindra monina, dia mbola olom-pirenena mendrika hanana zo izy ireo.
Ilaina amin'ny fanitarana ny tanàna ny fitomboan'ny mponina. Tsy azo lavina fa niteraka olana ihany koa, no sady azo antoka fa nitondra fandrosoana ireo “mpiasa tsy an'asa”. Ohatra, ny fahasarotana amin'ny fitantanana ny filaminana, ny kolontsaina ambany kokoa amin'ny ankapobeny, fepetra ara-pahasalamana ambany kokoa sy olana hafa. Saingy ny teny hoe “manala” dia mahatonga ny olona hahatsapa fa firenena hafa izany. Ao amin'ny firenenao manokana, any amin'ny taninao, raha tsy manana asa ianao dia tokony ho esorina ve? Fisainana inona izany? Inona no nitranga tamin'ny fanajana an'ity vahoaka ity?
Deng Luwen, mpanao fanadihadiana ao amin'ny China Business Net niantso ny soso-kevitra ho “fomba fisainana mahazatra eo amin'ny governemanta kamo “. Nilaza izy fa manan-jo voalazan'ny lalàm-panorenana ny mpiasa mpifindra monina mba hifindra toerana any amin'izay tiany, raha mbola tsy nanao heloka bevava izy ireo. Ny zo toy izany, hoy izy, dia voaro ihany koa amin'ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana momba ny Zon'olombelona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/25/119881/
 Southern Daily: http://opinion.nfdaily.cn/topic/content/2010-04/30/content_11558744.htm
 Hai Ta: http://szhaitao.blog.hexun.com/49268165_d.html
 Li Zheqi,: http://blog.china.alibaba.com/blog/lizhiqicbct/article/b0-i12743904.html
 China Business Net : http://www.cb.com.cn/1634427/20100507/128593.html